SIDA LOO SAMEEYO SARIIRAHA EE AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO IYAGA OO LEH GACMAHOODA - DHISMAYAASHA
Diyaarinta sariiraha ee lagu koriyo, geedi socod u baahan hab gaar ah. Ku guuleysiga khudaarta sii kordhaya waxay ku xiran tahay meesha ay ku habboon yihiin iyo qaabeynta. Taasi waa sababta su'aasha ah sida loo sameeyo sariiraha ee aqalka dhirta lagu koriyo waa mid walaac badan oo bannaanka u ah.
Sariiraha ku yaala aqalka dhirta lagu koriyo ee ku xiran dhibcaha wadnaha
Sidee baa Saar sariiraha ee aqalka dhirta lagu koriyo, waa lagama maarmaanka u ah xitaa marxaladda rakibidda. Haddii naqshadeynta si qaldan loo dhigay, ma noqon doonto suurtagal in la doorto meesha ugu wanaagsan ee sariiraha ee lagu koriyo.
Su'aasha ah jihada sariiraha ee dhibcaha qadiimiga ah ayaa muhiim gaar ah leh, tan iyo iftiiminta dhirta waxay ku xiran tahay habka koritaanka. Dhaqanku waa qalabkooda waqooyi ilaa koonfur.
Si kastaba ha ahaatee, qaabkani ma aha mid ku haboon dhamaan dhaqamada. Way ku habboon tahay koritaanka dalagga dheer. Dhirta koreysa ee koraya way fiican tahay laga bilaabo galbeed ilaa bari.
Haddii aqalka dhirta lagu koriyo uu ku yaal meel aan joogto ahayn, markaa waa in loo jeedaa dhinaca koonfureed, iyo beeritaanka dusha sare ee geedka.
Qayb kasta oo la socota qalab noocan oo kale ah ayaa ka sarreeya kii hore, taas oo macnaheedu yahay in dhirta oo dhan ay heli doonaan inta ugu badan ee iftiinka ah.
Wixii geedo ama dhirta dufan ee gudaha aqalka dhirta lagu koriyo waxay u diyaargaroobaan derbiyada aqalka dhirta lagu koriyo. Dhirta waxaa dib loo habeyn karaa shelf si ay u koraan, iyaga oo hubinaya in ay ugu badan yihiin iftiiminta.
Wareegga sariirta ee ugu fiican
Baaxadda sariiraha ee lagu koriyo si toos ah waxay ku xiran tahay wadarta guud
Doorasho xiiso leh oo ku habboon oo ay ku sameeyaan laba sariirood 45 cm ballaaran oo derbiyada, oo weliba intaa ka sameysma isla mid ah xarunta dhexe ee lagu koriyo.
Haddii aqalkaaga kuleylku uu leeyahay saqaf wayn, waa in la soo galo bartamaha, iyo dariiqyada derbiyada. Baaxaddiisu waxay u dhigantaa 150 cm.
MUHIIM. Waa in la ogaadaa in dhexdhexaadinta u dhaxaysa cirifka waa inay ahaataa ugu yaraan konton mitir.
Waxaan sariirta ku sameynaa Mitlayder
Farsamadan waxaa lagu tijaabiyay tijaabo lagu qaaday 50 sano. Natiijo ahaan, waxaa la xaqiijiyay in width of sariiraha of 45 cm iyo cabbirka marinnada u dhexeeya iyaga oo ku saabsan 90 cm ee xaaladaha ee aqalka dhirta lagu koriyo, dhirtu waxay helayaan illoobin iyo helitaanka hawada ugu fiican. Dhulgariirku wuxuu isla markiiba u jeedaa waqooyiga ilaa koonfureed.
MUHIIM. Sida laga soo xigtay habkan of beerashada, loosening ee ciidda ka yar dhirta ayaa laga saaray.
Waa maxay sarajooggu waa inuu sariirood u yahay aqalka dhirta lagu koriyo
Si beerista tayo sare leh ee khudradda, waxaa muhiim ah ma aha oo kaliya sida loo qorsheeyo sariiraha lagu koriyo, laakiin sida ay u dheer tahay inay ahaadaan.
Soodhafyada fudud ee aqalka dhirta lagu koriyo, heerkulku waa dhererka 20 cm. Noocan ayaa ku habboon gobollada diiran. Tan iyo kulaylka dabiiciga ahi wuxuu ku filnaan doonaa horumarinta dhirta.
Gobollada leh xasillooni la'aan iyo heerarka kuleylka diiran ee kulul, waxa la doorbidi karaa in la sameeyo sareeya, iyo sariiro diiran oo ka fiican.
Beerto sare waxaa lagu dhisaa iyadoo lagu rakibayo sanduuqyo alwaax ah oo lagu koriyo. Qeybta ugu hooseysa waxaa lagu daboolay agrofiber waxaana ka buuxsamay carrada. Heerka carrada waa inuu ahaado 35-40 sentimitir. Beerta dhererkeedu waxay ku jirtaa carrada ciribta leh, oo midho dhaadheer ayaa horay u dhacda.
Haddii aad go'aansato inaad hore u soo baxdo khudradda aqalka dhirta lagu koriyo, dhererka waa in la kordhiyaa ilaa 80 sentimitir. Tani waxay u oggolaaneysaa ciidda in ay si degdeg ah u kululaato si loogu diyaariyo beeritaanka geedo.
MUHIIM. Meelaha sarre ee isku midka ah ee beerto waxay u baahan yihiin in la sameeyo khudradda sii kordhaysa ee aan haboonayn.
Qarsoonaanta qalabka sariiraha diiran
Heerkulka ugu sareeya ee ciidda waxaa fududeeyay dhismaha sariiraha diiran ee gabaadyada kala duwan. Qeybinta waxay ku xiran tahay fiilaha nafleyda:
Barkad alwaax ah. Waxaa lagu dhejiyaa qiyaastii 40 cm oo qoto dheer, waxay ka koobantahay lakabka noocyo kala duwan oo qoryo ah: xabbado qoyan, caleemo, geedo qoryo leh, waxaas oo dhan waxaa lagu daadiyaa biyo karkaraya si loo bilaabo geedi socodka burburka. Lakabka birta waxaa lagu daboolay lakabka digada qallalan. Wuxuu awoodaa in uu diiriyo ilaa 70 darajo oo uu heerkulka u hayo 20-25 maalmood.
MUHIIM. Ha dhigin digada cusub - laga bilaabo xididdada dhirta ayaa gubi doona.
Iyada oo caws ama foliar. Xaaladdan oo kale, qashinka waxaa lagu qodaa waraaqda xayawaanka ah iyo lakabka dhulka waxaa ku jira caws la jarjaray ama caleemo qallalan. Waxaad isticmaali kartaa waxkasta qudaarta, iyo sidoo kale qashinka cuntada, maqaar baradho.
Suufka kuleylka, ee gudaha la dhigo, waa mid is dulfuulan, daadana biyo kulul iyo daboolay filim madow ah ee kuleylka. Darmalku wuxuu soconayaa 5-7 maalmood.
Waqtigaan ka dib, ciidda bacrin ah 30 cm sare waxaa la dhigaa lakabka kuleylka oo dhan laba ilaa saddex toddobaad ka horinta caadiga ah.
TALO. Waqtiga xaadirka ah, diyaargarow gaar ah ayaa laga arkay suuqa, kor u qaadida geedi socodka suuska ee lakabka hore. Waxay daadiyeen fiilo iyo waxay bilaabaan inay soo saaraan kuleyl.
Hoos ka fiiri: koriinka dhismaha gudaha sariiraha sawir, sariiraha aqalka dhirta lagu koriyo
Sida loo doorto qaabka sariiraha
Isku xirka aqalka dhirta lagu koriyo waa mid ka mid ah waqtiyada ugu muhiimsan ee helitaanka goosashada wanaagsan. Hadda waxaad taqaanaa sida ugu fiican ee loo qorsheeyo sariiraha lagu koriyo, si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale u baahan yihiin in si sax ah loo sameeyo. Tusaale ahaan, si ay dhulku u helin hurdo ku filan sariiraha lagu dhisay koriyo, waxaad u baahan tahay inaad sameyso. diyaargarow. Waxaad dooran kartaa xalal diyaar ah oo aad u ballaaran oo maanta la heli karo (caag ah, birta loo galaafay, iwm.).
Aad u diyaarsan alumiiniyam. Waxyaabahan waxaa lagu daboolay walxo dhejis ah, taas oo adkeyneysa. Aluminiinka aluminiumka ah kama baqayaan qoyaanka iyo kuleylka aqalka dhirta lagu koriyo, sidaas darteed foomkan wuxuu kuu adeegi doonaa muddo tobanaan sano ah.
Ikhtiyaar ahaan, waxaad isticmaali kartaa qalab kasta oo la heli karo. Xoojinta degitaanka waxay noqon kartaa caawimo leben, kuraas, gogo 'raso, faybar, guud ahaan, qashinka dhismaha.
Waxyaabaha ugu fudud ee la soo saaro waa ciriiriga iyo foornada hore ee birta. Dhibicda doorashadani waa is-beddelid la'aan. Intaa waxaa dheer, geesaha fiiqan yihiin raaxo la'aan inta lagu jiro daryeelka daryeelka dhirta.
Soo saarida naqshadda shaqada - mid ka mid ah fursadaha ugu jaban uguna jaban. Hase yeeshee, dhibaatooyinkoodu waa jilicsanaan, sida lebbiska si dhakhso ah u bilaabmayo qoyaan, iyo xajmiga weyn, xitaa markaad xoqayso hal lebbiska, dhumucda derbiga waa mid aad u ballaadhan, oo cuno qaddar yar oo ciid ah oo faa'iido leh.
Intaa waxaa dheer, biyaha ayaa seegaya lebbiska inta lagu jiro waraabinta iyo boodhka qaar. Si looga hortago tani, dhigidda inta u dhaxaysa lebbiska iyo ciidda lakabka ee saqafka ayaa kaa caawin doona.
Naqshad laga bilaabo guddiyada hore sameeyey qaabka sanduuq afar geesood ah, kaas oo markaas ku shubay ciidda. Hase yeeshee, waa mid sahlan in la soo saaro, raqiis, laakiin waxay leedahay hal daroogo - boorsooyinka waxaa lagu dabooli karaa caaryar, ama fungus ayaa ku kori kara iyaga. Si looga hortago in tani dhacdo. Waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo kuraasta diyaarinta fungus.
Si looga hortago kuraasta ka soo jeeda, waxay kala soocaan lakabka ciidda iyadoo la saari karo walxaha saqafka. Tani waxay kordhinaysaa isticmaalka qaabka alwaaxyada dhowr sano.
Aad ugu fiicantahay samaynta deyrka polycarbonate caag ah, ka haray soo saarista daboolka lagu koriyo. Qalabkani waa mid daba-joog ah, cirbadaha laga sameeyey waxay kaa qaadi doonaan ugu yaraan 10 sano.Qorshaha 30 cm sare iyo 1-15 mitir dheer, waxaa lagu aasay dhulka oo wuxuu ku xiran yahay qoryaha qoryaha si loogu kalsoonaado.
Bumpers ka dhalooyinka quraaradaha marka laga reebo in looga hortago finiicinta iyo dhaqidda ciidda, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa kuleylka Haddii xayndaabku ka samaysan yahay dhalooyin yar oo dhulka lagu qodo oo biyo ka buuxsamo, kuleylinta kulaylka ayaa habeenkii kuleyli doona.
Nidaamka diyaarinta sariiraha ee aqalka dhirta lagu koriyo waxay u baahan tahay waji halis ah, tan iyo xajmiga dalagga iyo fududaanta daryeellidda dhirtu waxay ku xiran tahay meesha ay ku haboon iyo diyaargarow wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, sida aad u arki karto, sameynta sariiraha ee aqalka dhirta lagu koriyo oo gacmahaaga ah waa dabacsanaan.